C01 USB-C adabtarada maqalka
C02 USB C Jack Adabtarada
Keli Port USB-C HUB
Qeexitaanka USB4 wuxuu bogaadinayaa oo ku dul dhismayaa USB 3.2 iyo USB 2.0 qeexitaannada jira. Qaab dhismeedka USB4 wuxuu qeexayaa qaab lagu wadaago hal xiriir xawaare sare leh noocyo badan oo qalab dhammaad leh oo firfircoon oo sida ugu fiican ugu adeegta wareejinta taariikhda by tyye iyo codsi. Sida USB Nooca-C ...
HDMI waxaa loogu talagalay in lagu badalo isweydaarsiga codka analogga ah ee duugga ah iyo gudbinta fiidiyowga sida SCART ama RCA terminals. Waxay taageertaa TV-yada kala duwan iyo qaababka fiidiyowga kumbuyuutarka, oo ay ku jiraan SDTV, HDTV video, oo lagu daray maqal dijitaal ah oo badan. Labada HDMI iyo UDI labadaba iyagoon shaqeynin gudbinta codka ayaa dhaxlaya mid ...
HDMI miyuu ka fiican yahay VFA, hadday saas tahay, waa maxay sababta?
VGA wuxuu ku soo dhowaanayaa 35 sano jir hadda waana qaab analog ah. Kumbuyuutar casri ah tani waxay ka dhigan tahay inaad ka beddelayso dijitaal dijitaal ah, oo ah 'analog RGB & sync', ka dib dib ugu noqosho dijitaal ah si aad ugu muujiso kormeerahaaga LED / LCD - waxaa jiri doona xoogaa luminta tayada muuqaalka heer kasta, oo ay ku jiraan ...
Waa maxay heerka USB 3.2?
Universal Serial Bus, ama USB, wuxuu jiray muddo dheer waxaana u adeegsanay inaan ku xirno aalado kala duwan oo fara badan laga bilaabo kaydinta ilaa qalabka soo gelinta. Markuu waqtigu idlaado, heerarka ayaa loobaahanyahay in la cusbooneysiiyo si ay ula socdaan qalabka casriga ah iyo shuruudaha isticmaalaha dhamaadka. Tilmaamo iyo farsamo d ...
Xarunta USB-C & USB 3.1 Soo ogow wax kasta oo aad u baahan tahay inaad ka ogaato xarumaha USB-C iyo USB 3.1 halkan. Waa maxay farqiga u dhexeeya? Ma jiraan wax kala sooc ah? USB Type-C waa qaab isku xiraha oo la soo saaray sanadkii 2015. Isku xiraha nooca-A, oo muddo dheer soo jiray, waa in la beddelaa ...
Xarunta USB 3.0 Heerka USB 3.0 ee la soo bandhigay 2008 wuxuu ballanqaaday in si xawli ah loo kordhiyay heerka wax soosaarka marka la barbar dhigo USB 2.0 tiknoolojiyadda ka horreeyay. Xaqiiqda ah in USB 3.0 uu la jaanqaadi karo tiknoolajiyaddii hore, qalabkii duugga ahaa ayaa wali awood u leh in lagu isticmaalo xarun cusub oo USB 3.0 ah. Soo koob ...
Muxuu HDMI inoo keenayaa?
Tiknoolajiyada HDMI Ku dhowaad siddeed bilyan oo qalab oo lagu shaqeeyay teknoolojiyadda HDMI ayaa la raray tan iyo markii ugu horreysay ee qeexitaanka HDMI la sii daayay bishii Diseembar 2002. Qeexitaankii ugu dambeeyay ee HDMI 2.1 ee la sii daayay Noofembar 2017 wuxuu sii wadaa inuu awood u yeesho horumarinta qaybaha wax soo saarka cusub iyo hal abuurka solutio ...
waa maxay qeexitaanka HDMI 2.1;
HDMI 2.1 Qeexida HDMI® Qeexitaanka 2.1 waa cusbooneysiintii ugu dambeysay ee qeexitaanka HDMI waxayna taageertaa xalal badan oo fiidiyowyo sare ah iyo heerar cusbooneysiin oo ay kujiraan 8K60 iyo 4K120, iyo qaraaraad gaaraya 10K. Noocyada firfircoon ee HDR ayaa sidoo kale la taageeraa, iyo awoodda baaxadda ayaa la kordhiyaa ...
Sidee USB isku xira Type-C uga shaqeeyaa HDMI Alt Mode?
The HDMI Alt Mode ee isku xiraha USB Type-CTM wuxuu u oggolaanayaa aaladaha ilaha HDMI-karti u leh inay adeegsadaan isku xiraha USB Type-C si toos ah ugu xirnaado bandhigyada HDMI-karti u leh, oo gaarsiiya HDMI calaamadaha iyo astaamaha kaamerada fudud iyada oo aan loo baahnayn maamule iyo isku xira adabtarada ama dongles. Tani waxay awood u siineysaa t ...
waa maxay USB 3.2?
Faahfaahinta USB 3.2 Maaddaama hal-abuurnimada teknolojiyaddu horay u socoto, noocyo cusub oo qalab ah, qaabab warbaahineed, iyo keyd ballaaran oo raqiis ah ayaa isku soo dhacaya. Waxay si aad ah ugu baahan yihiin xawaare dheeri ah si ay u ilaaliyaan khibradaha is-dhexgalka isticmaaleyaashu ay filayaan. Intaa waxaa dheer, codsiyada isticmaaleyaasha waxay dalbanayaan hi ...
Feature of USB xeedho (Delivery Power USB)
USB wuxuu ka soo gudbay interface data awood u siinaya awood xadidan bixiyaha aasaasiga ah ee awooda leh interface data. Maanta aalado badan ayaa lacag ka qaada ama ka helaa xoogooda dekedaha USB ee ku jira kumbuyuutarrada gacanta, gawaarida, diyaaradaha ama xitaa saldhigyada derbiga. USB-ga wuxuu u noqday god koronto oo meel walba yaala ...
1. USB Type-C® Cable iyo Connector Specification waxaad u baahan tahay inaad ogaato
USB Type-C® Cable iyo Qeexitaanka faahfaahinta Isku xirka guusha joogtada ah ee xiriirka USB, waxaa jira baahi loo qabo in la waafajiyo tiknoolajiyada USB si loogu adeego aaladaha cusub ee xisaabinta iyo aaladaha maadaama ay u janjeeraan dhanka arrimo yar yar, dhuuban oo fudud. Qaar badan oo ka mid ah aaladaha cusub iyo aaladaha cusub ayaa r ...
Furan: 8:00 Subaxnimo - Xidhitaan: 22:00 PM
Noqo qof xirfad leh maxaa yeelay waa u heellan, annaga ayaa na doorta, wuxuu doortaa khibrad adeeg oo kala duwan Shirkadeena waa isku-darka xalka isku dhafan ee R&D, naqshadeynta, wax soo saarka iyo adeegyada suuqgeynta.
Cinwaanka: Xarunta Innovation-ka Wanfeng, Wadada Gobolka 1048th 358, Deegaanka Shatou, Chang'an Towm, Magaalada Dongguan, Guangdong, Shiinaha.
HDMI miyuu ka fiican yahay VFA, Hadday sidaas tahay, Maxaa ...
Saxiix noo Wargayska USN Life & hel foojar 10% ah